Ụtọ udara kwachaa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ụtọ udara kwachaa
Apricot kwachaa bụ otu ihe dị mkpa ma dị oké mkpa nke nlekọta.
Maka inwe ọganihu na-eto eto ma na-amị mkpụrụ nke osisi mkpụrụ osisi n'ubi ahụ, ha aghaghị ịmalite site n'ilekọta na ilekọta ha. Otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa nke nlekọta dị otú a bụ ịkụcha osisi. Ọchịchị a anaghị agafe apricot, nke dị ezigbo ọkụ-achọrọ ma nwee nnukwu branched, ma n'otu oge ahụ, ọ bụ alaka dị iche iche.
Akụkụ nke ịcha bei
Ndị cherị dị ụtọ nwere ebe pụrụ iche n'ogige nke onye nweworo ahụmahụ, na ndị na-ekpebi ịkụ ya na nke mbụ, n'ihi na njirimara ụtọ ụtọ bụ nke na-ewu ewu ma okenye ma ụmụaka. Maka mkpụrụ osisi nke osisi mara mma ndị mara mma iji mee ka anyị nwee obi ụtọ, anyị kwesịrị ilekọta osisi ahụ. Na nke a abụghị naanị ịgbara na egwu egwu, mana kwachaa oge niile, nke na-ekwesịghị imerụ ahụ, kama ọ na-enyekwa aka ịba ụba na ogologo oge nke osisi ahụ.
Ụtọ udara Iwu maka nlekọta osisi mgbụsị akwụkwọ
N'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe akwụkwọ ikpeazụ na-esi na cherị na osisi na-akwadebe maka ezumike oyi, onye na-elekọta ubi kwesịrị ichefu udo. A sị ka e kwuwe, nke a bụ oge mgbe osisi chọrọ nlekọta dị ukwuu, tillage, ịkwanye osisi na nchebe site na oyi oyi na-eru nso. N'okpuru ebe a bụ ntụziaka dị iche iche maka nlekọta cherị n'oge mgbụsị akwụkwọ, nke ị ga - eji ngwa ngwa mee ngwa ngwa n'ubi gị.
Ebumnuche nke ịkụzi ose ohia na griin haus: ebee ga-amalite na ihe mere o ji dị mkpa?
Mkpụrụ tomato "Chocolate" na-eto eto na njirimara
Nsen akwa: uru ma ọ bụ nsogbu
Otu esi esi mmiri ma zụọ mkpụrụ vaịn na mmiri
Akpa kachasị ochie n'ụwa: ebee ka orchid si abịa, ọ dịkwa mkpa ka ifuru ahụ chọọ nchebe na otu esi elekọta ya?
Ihe ime ma ọ bụrụ na aphids pụtara na ose seedlings: esi agha, ihe na-emeso? Nakwa pests ndị ọzọ: udide ududo, thrips, slugs
Chernokoren officinalis: ọgụ megide ụmụ oke na pests ndị ọzọ nke ubi
Enwere ike inye nkume pel